जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको सनाखत - जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको सनाखत
जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सबैको सनाखत
२०७५, १७ चैत्र, 11:56:23 PM
ओखलढुंगा । ओखलढुंगामा भएको जीप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका ६ जनाकै सनाखत भएको छ । दुर्घटनामा ताप्लेजुङको ओलाङचुनगोलाका ५५ वर्षका मिङ्मा शेर्पा, ताप्लेजुङको फत्तालुङका ४५ वर्षका साम्गेल शेर्पा, काठमाडौं बौद्धका ४० वर्षका ङवाङ सेर्तुङ शेर्पा, सोही ठाँउका ३५ वर्षीय नोर्बु शेर्पा, वाङदा शेर्पा र डोमा शेर्पाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रहरी निरीक्षक राजिव श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनकाअनुसार ज्यान गुमाएका मध्ये चार पुरुष र दुई जना महिला छन् ।
सोलुखुम्बुको जुनबेशी गुम्बाबाट पुजापाठ गरेर काठमाडौं फर्कदै गरेको बा १६ च २२०७ नम्बरको जीप दुर्घटना भएके हो । जीप सडकबाट करिब २ सय मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनामा चालक कृष्ण श्रेष्ठसहित तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइतेको उदयपुरको घुर्मीमा उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि काठमाडौं पठाइएको छ ।
जीप दुर्घटनामा पूर्व सांसद भण्डारीसहित दुईको मृत्यु, ८ जना घाइते !
ब्रेक फेल हुँदा डडेल्धुरामा बस दुर्घटना, ३१ यात्रु घाइते
छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा ४ जनाको मृत्यु
ओखलढुङ्गामा जीप दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु !
दार्चुला–तिङ्कर सडकमा जीप दुर्घटना, मृतक सबैको सनाखत